स्याउको बजारिकणमा स्थानिय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? (अडियो सहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, ९ भदौ (जागरण) । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाको लेकाली क्षेत्र सिप्टीमा उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा कृषक चिन्तित बनेका छन् । बगैंचामा लटरम्म फलेको स्याउ बिक्री नभएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन् ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ का ३० जना कृषकले सिप्टीमा उत्पादन गरेको स्याउ खेर गइरहेको स्याउ उत्पादक कृषकले बताउने गरेका छन् ।
जनतासँग जनप्रतिनिधी अन्तर्गत कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष डबल बोगटीसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई हामिले कृृषकले उत्पादन गरेको स्याउ बजारिकरण गर्न तपाइहरुले केही व्यवस्था गर्नु पर्दैन ? भनेर सोधेका छौँ ।
सुन्नुहोस् यो अडियोः